Kupasiswa kweBhiri reMitemo yeSarudzo Kokonzera Mutauro Mukuru
Parliament of Zimbabwe Open House
Mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anoti haasi kufara nenyaya yekuti bhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo, Electoral Amendment Bill, rakapasa muparamende nezuro risina zvizhinji zvavaida zvakaita sekuti kudhindwa kwemapepa ekuvhotesa kana kuti maballot papers kuitwe pachena.
Mubatanidzwa wemapato manomwe anopikisa pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance unoti hausi kufara nezvakaitika uye uchiri kuzeya nyaya iyi usati wazivisa veruzhinji danho raachatora.
Mutauriri webato reMDC inotungamirirwa naVaWelshman Ncube, avo vanove mutairiri weMDC Alliance, VaKurauone Chihwai, vaudza Studio7 kuti semaonero avo, mapato ese achapinda musarudzo anofanira kuve nechekuita nekudhindwa nekufambiswa kwemapepa ekuvhotesa.
Mutungamiriri Renewal Democrats of Zimbabwe zvakare vari sachigaro wemubatanidzwa wemapato weCoalition of Democrats, VaElton Mangoma, vaudza Studio 7 kuti zvaitika izvi zvinoratidza kuti bato riri kutonga reZanu PF haridi kusandura mutemo wesarudzo.
VaMangoma vane nyaya iri kudare reConstitutional Court uko vari kuda kuti dare iri rimanikidze gurukota rezvemutemo, gweta guru rehurumende pamwe neZImbabwe Electoral Commission, ZEC, kuti vavandudze mutemo wesarudzo kuti uenderane nebumbiro remutemo wenyika.
VaMangoma vanoti zvichitevera zvakaitika muparamende, vave kuzovandudza nyaya yavo iri kudare.
VaMangoma vati bumbiro remitemo yenyika rinotaura pachena kuti ZEC inofanira kunge yakazvimirira nekudaro ZEC inokwanisa kuronga kuti nyaya yemaballot papers yofambiswa sei isingatevedzi mutemo weElectoral Act.
Gurukota rezvemutemo, VaZiyambi Ziyambi, vakaramba zvaidiwa neMDC T inotungamirirwa naVaNelson Chamisa kuti ballot papers adhindwe pachena vachiti izvi hazvifambirani nemutemo wekutengwa kwezvinhu muhurumende weProcurement Act.
Mutauriri sangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira eCrisis Coalition, VaTabani Moyo, vanoti nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana nyaya yedhindwa kwemaballot papers ikasaitwa pachena.
Bhiri iri rasara kusainwa nemutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa , risati rave mutemo.
VaMangagwa vanotarisirwa kuzivisa zuva richaitwa sarudzo mukupera kwemwedzi uno.